Gastronomy - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Sakafo mahazatra any Frantsa
Ny sakafo frantsay dia mitovy dika amin'ny kalitao sy fanatsarana. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo gastronomies lehibe indrindra manerantany….
Tsenan'i San Miguel any Madrid
Asehonay aminao izay rehetra azon'ny Mercado de San Miguel atolotra anao eto afovoan'i Madrid, toerana gastronomika tsara kalitao.
Ny gastroomy any Meksika
Raha resaka sakafo dia misy ohabolana Meksikana milaza fa "kibo feno, fo falifaly." Na inona na inona…
Gastronomy an'i Italia
Ny gastronomy any Italia dia manana lovia efa nitety an'izao tontolo izao tamin'ny lazany sy ny hafa izay matsiro toy izany koa.
Ny gastr gastrikan'i Frantsa
Frantsa dia manana gastronomie malaza angano, mihoatra ny vonona ny handray anao rehefa manandrana azy ianao. Manomboka amin'ny mofomamy tsara indrindra ka hatramin'ny tsiro tsotra sy mora. Ho any Frantsa ve ianao? Ankoatry ny tranombakoka sy ny trano mimanda dia misy ny entona entiny. Ny mahandro Fracnese dia mahafinaritra amin'ny mamy sy masira. Mihinana!
Basque pinchos, fomban-drazana gastronomika iray manontolo
Ny pinchos Basque dia anisan'ny manintona izay manetsika mpizahatany maro hitsidika ny tany Basque tsara tarehy, miaraka amin'ny sakafo matsiro azo tsapaina amin'ny manaikitra kely.
Ahoana no hankalazana ny Noely eto amin'izao tontolo izao?
Ny 24 desambra izao dia ny alin'ny noely. Manerana ny planeta dia olona 2.200 XNUMX tapitrisa no ...
Mamy Krismasy 10 mahazatra any Espana
Rehefa mandehandeha isika dia misy fomba samihafa amin'ny fahalalana firenena, na amin'ny alàlan'ny tantarany, ny tantaram-piainany, ny zavakanto misy azy ...
León, renivohitra Espaniôla an'ny Gastronomy 2018
León, renivohitra Espaniôla an'ny Gastronomy 2018, nandimby ilay tamin'ny taon-dasa: Huelva. Inona avy ireo vokatra mampiavaka an'i León?
Ny terraces fahavaratra 16 tsara indrindra any Madrid
Ireo izay nanararaotra nandany andro vitsivitsy tany Madrid nandritra ny fahavaratra dia afaka nanamarina fa ny alina ...
Ny kamiao mpitondra sakafo tsara indrindra any New York
Ny mahazatra rehefa miresaka sakafo any New York dia ny kamiao mpitondra sakafo. Sakafo an-dalambe, fa miaraka amin'ny tsiro rehetra manerantany ary amin'ny vidiny lafo.
Aiza no hisotro vermouth any Madrid toy ny saka marina?
Izay nipetraka kelikely tao Madrid dia ho hitanao fa ny fisotroana vermouth na vermouth ao amin'ny ...
Fantaro ny kolotsaina Indiana ary tadiavo ny fomba amam-panaon'ny Hindoa amin'ny resaka fivavahana, gastronomia, fety ary betsaka amin'ny kolontsaina Hindo.
Durian, voankazo maimbo indrindra eto an-tany
Durian no voankazo fofona maimbo indrindra eto an-tany, inona ny fofony ratsy? Lazainay anao ny tsiambaratelo rehetra amin'ity voankazo ity izay maimbo be.
Masiaka sy tena matsiro, gastronomia grika io
Ny sakafo mediteraneana dia mitovy amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja izay manome tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany ho an'ireo izay ...
Sakafo 5 tsy azonao hatsahatra ny fanandramana ao Buenos Aires
Buenos Aires? Mihinana! Amin'ny maha tanànan'ny mpifindra monina azy dia misolo tena ny sakafo rehetra, saingy tondroy ireo sakafo dimy tsy azo nolavina ireo.
Ny zava-mamy amin'ny Paska mahazatra any Espana
Nandritra ny herinandro masina dia niova i Espana. Misy fomba maro hahitana ity firenena eropeana ity amin'ny alàlan'ny ...
Raha omaly no nitondranay ny delicatessen avy amin'ny faritany 4 Andalosiana, anio dia holazainay aminao ireo avy amin'ny efatra ambiny: Malaga, Granada, Almería ary Jaén.
Fitsidihan'ny toekarena any Andalusia (I)
Amin'ity lahatsoratra androany ity dia mitondra fofona sy tsiro amin'ny Andalusia tianay izahay. Fantaro eto ny lovia mahazatra an'ny Huelva, Cádiz, Córdoba ary Seville.
Manomboka amin'ny polvorón ka hatramin'ny polvorón amin'ny alàlan'ny tanàna espaniola sasany
Raha iray amin'ireo mankafy ny famitana ny pitsopitsony amin'ny sakafo hariva amin'ny Krismasy ianao dia manolotra lahatsoratra gastronomic 100% anio
Croqueteros, aiza no hihinanana croquette tsara indrindra any Madrid?
Croquette dia iray amin'ny sakafo matsiro indrindra amin'ny gastronomia Espaniola. Taonjato maro lasa izay ny niandohany tao ...
Tsena gourmet 4 izay tianao hotsidihina any Espana
Ny tsenan-tsakafo taloha any an-tanàna dia nanjary, toerana mandeha amin'ny gastronomika, rehefa mandeha ny fotoana ...
Ny gastronomy Peroviana dia heverina ho iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany satria vokatry ny fusion ...
Handeha any Chine ve ianao? Fantatrao ve fa misy sakafo fahandro valo fa misy tsiro an-jatony? Aza hadino ny manandrana ny nahandro sinoa mahafinaritra. Hikoty ny rantsan-tànanao ianao!
Mandehandeha any New York ve ianao sa nofinofisinao ary handeha ho tonga saina amin'izany? Tsara! New York no tsara indrindra ...
Tsena Gourmet 5 any Madrid ho an'ny sakafo ara-tsakafo
Nandritra ny fotoana fohy izao, ny tsenan'ny gourmet dia nitombo tao amin'ireo renivohitra faritany lehibe lasa ...
Mikatona ny tsenan'i Donghuamen malaza any Beijing
Any Espana sy amin'ny manodidina antsika akaiky, ny fihinanana bibikely dia toa tena tsy mampaninona anay. Fa ny tena izy dia…
Any Chine dia mihinana bibikely ary tena sakafo matsiro izy ireo. Te hahafantatra izay bibikely mahandro ve ianao ary afaka manomboka lanina any Eropa?
Sago Gula Melaka, tsindrin-tsakafo nasionaly ao Malezia
Fantatrao ve ny sakafo matsiro mahazatra indrindra any Malezia? Sago no tena mampiavaka azy fa misy zava-mamy bebe kokoa hanomanana tsindrin-tsakafo amin'ny sakafonao.
Fa maninona isika no tena tia torrijas amin'ny Paska?
Amin'ny alahadin'ny paska dia mifarana anio ny herinandro masina izay midika fiverenana amin'ny fomba mahazatra aorian'ny vitsy ...
Jereo ny zava-dehibe indrindra amin'ny kolotsaina Filipiana: fomba amam-panao, fiteny ary fampahalalana hafa mifandraika amin'ny gastronomy, fivavahana ary maro hafa.
Gastrozy any Filipina
Inona avy ireo lovia mahazatra any Filipina? Hitanay ny sakafo izay tena tianao indrindra eto Filipina mba hahafantaranao izay tokony ho fanandramanao amin'ny dianao.
Ny trano fisakafoanana 10 tsara indrindra ho an'ny sakafo Japoney any New York
Jereo ny trano fisakafoanana japoney 10 tsara indrindra any New York. Raha tianao ny sushi sy lovia hafa mahazatra ny sakafo Japoney dia aza hadino izany.
Zavakanto momba ny fahandro any Kambodza
Jereo ny sakafo kambôdzianina mahazatra ary manomàna fomba fahandro miaraka amin'ny tolo-kevitry ny gastronomika izay ho hitanao momba ny gastronomy kambodziana mahazatra.
Ny Birin'i Carlsberg any Copenhagen
Mandehandeha any Copenhagen izahay hitsidika ny Carlsberg Beer Factory, fitsidihana mitarika fahafantarana ny fizotry ny famokarana, ny tantarany ary, farany, nanandrana ny tsirony
Vary nendasina pataloha pataloha fomba Koreana
Vary nendasina ny hano dia lovia Koreana Tavaratra azontsika atao ao an-tranontsika manokana mba hanomezana ny latabatry ny firenena iray.
Antony very any amin'ny morontsiraka andrefana andrefana (I)
Mieritreritra ve ianao fa tokony hanome anao antony hivoahana amin'ny morontsiraka andrefana Andrefana (I) izahay? Ireto misy vitsivitsy, ary rahampitso dia mihombo hatrany.
Ireo tsindrin-tsakafo matsiro an'ny gastrisy any Goiana
Amin'ity lahatsoratra ity dia fantatsika ny sasany amin'ireo tsindrin-tsakafo amin'ny gastr gastrikan'i Guyana izay hamaranantsika ny dingana voalohany amin'ny Kitchens of the World
Mafe dia lovia fanta-daza any Gambia ary amin'ny ankamaroan'ny Afrika Andrefana, dia fiomanana mifototra amin'ny akoho sy voanjo.